Dummies - ကျန်တဲ့ကျန်တဲ့သူများအတွက်ရည်ညွှန်းချက်! | Martech Zone
ဗုဒ္ဓဟူးနေ့, စက်တင်ဘာလ 2, 2009 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ပြီးခဲ့သည့်အပတ်ကကျွန်ုပ်၌ Indy Christian Geeks နေ့လည်စာစားခဲ့သည် အကြိုက်ဆုံးကော်ဖီဆိုင်။ နေ့လည်စာစားချိန်၌ကျွန်ုပ်သည်လူကောင်းများထံအထူးလက်ဆောင်တစ်ခုပေးခဲ့သည် Wiley ထုတ်ဝေရေး (ဤနေရာတွင်လည်း Indianapolis ၌တည်၏!) ။ ယောက်ျားတွေကပျော်စရာကောင်းတယ်။ ဓာတ်ပုံတချို့ရိုက်ပြီးမိနစ်ပိုင်းအတွင်းမှာ The Secret is Out!
ဘေးဖယ်နောက်ကွယ်မှာ, Wiley တကယ်နှင့်အတူထုတ်ဝေစက်မှုလုပ်ငန်းအတွက်မယုံကြည်နိုင်လောက်အောင်အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့ပါတယ် Dummy ကုန်အမှတ်တံဆိပ်။ ဗြောင်ကျကျထုပ်ပိုးပြီးသူတို့၏စာအုပ်များကိုတံဆိပ်ကပ်ခြင်းအားဖြင့်ဖြစ်သည် Dummy အဘို့သူတို့ရေးသားသောအကြောင်းအရာများနှင့် ပတ်သက်၍ လူများစိုးရိမ်ပူပန်မှုကိုချက်ချင်းကျော်လွှားနိုင်ခဲ့သည်။ ယခု Dummies တွင်ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေထားသည့်စာအုပ်ပေါင်းသန်း ၁၅၀ ကျော်နှင့်ခေါင်းစဉ်ပေါင်း ၁၄၀၀ ကျော်ရှိသည်။ Dummies သည်ကမ္ဘာ့အရောင်းရဆုံးရည်ညွှန်းတံဆိပ်ဖြစ်သည်။
Dummies တံဆိပ်သည်တံဆိပ်အောက်တွင်မရပ်ပါ။ စာအုပ်၏အရေးအသားပုံစံမှာစကားစမြည်ပြောခြင်း၊ မှန်ကန်သောစစ်ဆေးရမည့်စာရင်းကိုရှာရန်စာအုပ်များကိုအလွယ်တကူလှန်လှောကြည့်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်အဖုံးမှအဖုံးဖတ်နိုင်သည်။ Wiley နဲ့စကားပြောတဲ့အခါမှာသူတို့ဟာထုတ်ဝေမှုကိုသိပ္ပံပညာတစ်ခုအထိအမှန်တကယ်ရရှိထားတယ်။
ငါပြောခဲ့တယ် Kyle Lacyလာမည့် Dummies အတွက် Twitter Marketing အတွက်ရေးသားသူဖြစ်ပြီး၎င်းသည်စာအုပ်ရေးသားခြင်းသည်မယုံနိုင်စရာအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့သည်။ တည်းဖြတ်အဖွဲ့သည်သူ၏အကြောင်းအရာများကိုပုံသဏ္intoာန်ရအောင်ပံ့ပိုးပေးခြင်း၊
Dummies ကိုအွန်လိုင်းကိုးကားချက်များနှင့်အတူတိုးချဲ့ခဲ့သည် Dummies သတင်းလွှာ! သင်သည်ထိုသူတို့အပေါ်ကိုဖမ်းနိုင်ပါတယ် တွစ်တာ, Facebook က နှင့် Youtube ကိုအရမ်း! သူတို့ရဲ့ site ကိုစစ်ဆေးပါ - အဲဒီမှာအဲဒီမှာပစ္စည်းများစွာရှိတယ်။ သင်၏စီးပွားရေးအတွက် Facebook Page တစ်ခုဖန်တီးနည်းဤအလွန်သေးငယ်သောသင်ခန်းစာကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်။
ထွက်စစ်ဆေးသွားပါ Dummy ကွန်ရက်စာမျက်နှာကိုရှာဖွေပြီးရှာဖွေပါ၊ သင်တွေ့တဲ့အရာကိုသင်အံ့ be သွားလိမ့်မယ်။ သင့်ရဲ့အစားအစာထဲမှာအမျှင်ဓာတ်ပိုမိုရယူခြင်းမှသည် Wilderness Survival အထိအရာအားလုံးကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိခဲ့ရတယ် (ဖြစ်နိုင်တာလည်းထပ်တူကျနေမယ်!)
Tags: ဒေသခံရှာဖွေရေးစျေးကွက်ရှာဖွေရေးအလိုအလျောက်လခလူမှုမီဒီယာpoeseo ပြန်လည်နာလန်ထူဆလိုက်လှည့်ကွက်လူမှုမီဒီယာအချက်အလက်များ
စက်တင်ဘာ 3, 2009 မှာ 3: 36 AM
ငါ့သမီးသည် ဤဌာနခွဲတွင် Wiley မှ ပရောဂျက်တည်းဖြတ်သူဖြစ်ကြောင်း ဂုဏ်ယူပါသည်။
3:2009 pm တွင်စက်တင်ဘာ 2, 48 မှာ
သဘောတူထားတဲ့ Doug – FYI ကျွန်တော် အောက်တိုဘာ 13 ရက်နေ့မှာ ထွက်တော့မယ့် Dummies for Dummies လို့ခေါ်တဲ့ အယောင်ဆောင်စာအုပ်တစ်အုပ်ကို ပြီးသွားပါပြီ။ http://www.amazon.com/Facebook-Marketing-Dummies-...
3:2009 pm တွင်စက်တင်ဘာ 5, 31 မှာ
ဒါဟာ အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ သတင်းပါပဲ။ ဂုဏ်ယူပါတယ်။ တွေ့ဖို့မျှော်လင့်နေပါတယ်။
3:2009 pm တွင်စက်တင်ဘာ 3, 18 မှာ
ကောင်းတဲ့ဆောင်းပါး။ မင်းရဲ့ ebook ကိုဖတ်ပြီး အသုံးဝင်တဲ့ အကြံဥာဏ်တွေ အများကြီးရခဲ့တယ်.. သူငယ်ချင်းကို မျှဝေပေးလို့ ကျေးဇူးပါ။